6 Ny tsingerin' ny rano
Aiza no ahitana ranoHanova
eny amin'ny habakabaka izay milatsaka ho orana
mari-pana maha ambony indrindra ny hakitroka : 4 °C
H2O1 no raikipohy simikan'ny rano. Izany hoe misy atome Oksizena anankiray mitambatra amin'ny atome Hidrozena anankiroa. 18g ny lanjany isa-môly.
Noho ny oksizena izay elektronegativa dia sintoniny manatona azy ny tambatra elektrona anankiroa izay eo amin'ny firaisany amin'ireo Hidrozena avy. Vokatr'izay dia lasa misy ampahana charge mitranga eo amin'ireo atoma tsirairay, miabo eo amin'ny H ary miiba eo amin'ny O. Noho ireo charges ireo dia lazaina fa polaire ny molekioln'ny rano. Mibaiko ny toetrany amin'ny ankapobeny io maha polaire azy io. Ohatra hoe :
lasa misy firaisana malefaka amin'ny tendro miiba sy miabo amin'ny molekiolana rano mifanakaiky : firaisana Hidrozena no iantsoana azy; hany ka lasa manao tambajotram-piraisana malefaka ny molekiola maro rehefa tafaraka. Dia izany no mahatonga ny rano ho lasa mitsiranoka amin'ny mari-pana sy tsindry mahazatra raha toa ka mientona daholo ny akora mitovitovy lanja isa-môly aminy.
afaka mifandray amin'ny molekiola polaire hafa ny rano amin'ny alalan'io firaisana malefaka io ihany. Toy izany no ahafahany mandevona an'ireo karazana asidra, alkalia ary sira isan-karazany; mbola toy izany koa no ahafahany mandevona siramamy; ary mbola toy izany koa no ahafahany mandena karazan'akora isan-karazany toy ny lamba, ny taratasy, ny hazo, sns. Antsoina koa hoe hidrofilika ireo akora polaires ireo.
noho ireo firaisana malefaka amin'izy samy izy amin'ireo molekiola polaires dia tsy afaka tafangaro aminy ireo molekiola izay tsy mba misy faritra polaire. Voailika ireo noho izany ka tsy mahita toerana ho azy eo anivon'ny rehetra. Noho izany dia tafaraka tsy fidiny ny samy tsy polaire, dia manao firaisana malefaka kokoa, karazana firaisan'i Van Der Waals. Izany no mahatonga ny rano sy ny menaka tsy ho afaka mifangaro, izany koa no mahatonga ny rano tsy hahalena plastika, na lamosina ganagana. Antsoina koa hoe hidrofobika ireo akora tsy polaires ireo.
Ny tsingerin' ny ranoHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Rano&oldid=1002250"
Dernière modification le 8 Martsa 2021, à 22:12
Voaova farany tamin'ny 8 Martsa 2021 amin'ny 22:12 ity pejy ity.